စိတ်ကြိုက်အင်္ဂလိပ်သီချင်းများရှယ်ရန် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > .:::ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ:::. > သီချင်းများ > စိတ်ကြိုက်သီချင်းများ > စိတ်ကြိုက်အင်္ဂလိပ်သီချင်းများရှယ်ရန်
View Full Version : စိတ်ကြိုက်အင်္ဂလိပ်သီချင်းများရှယ်ရန်
နိုင်ငံတကာ သီချင်းလေးတွေကို ဒီနေရာလေးမှာတင်ပေးပါခင်ဗျာ....... :) :)
2. Don&#039;t Stay
11. Nobody&#039;s Listening
Password : www.dl4all.com ( PW မပြောင်းပေး လိုက်ရတာ ဆောရီးဗျာ )
Download Link : http://mihd.net/2m4wld5
Hybrid theory လေးရှိရင်တင်ပေးကြပါအုံးးးး
Album: Underground V7.0
1 No More Sorrow
7 The Little Things Give You Away
9 Bleed It Out
တရုတ်သီချင်းလေးတွေကောင်းတယ်ဗျ နားအေးပါအေးနားထောင်ချင်သူတွေ ဒေါင်းလိုက်တော့.. ;D
ကြိုက်သလိုလုပ်ပါညီလေးရယ် အားလုံးနားထောင်လို့ရတာပေါ့ ကျေးဇူးအထူးပါပဲ
Puck Alter HeavyMetal Rap Metal ဆို
ဒါလေး (http://www.zshare.net/download/11871798694f085e/) ကိုပြောတာလား ;D ;D ;D
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ကိုနေကြီး ရေ ....:D
ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ... နားထောင်ကြည့်ပါ ...Pretty Woman ကားထဲက ဇတ်ဝင်တေးလေးပါ ...
Lyric လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
I wake up lonely,there&#039;s air of silence
It must have been love, but it&#039;s over now
&gt;From the moment we touched till the time had run out
Make believing we&#039;re together
That I&#039;m sheltered by your heart
And it&#039;sahard winter&#039;s day
It was all that I wanted, now I&#039;m living without
It&#039;s where the water flows, it&#039;s where the wind blows
TRULY MADDLY DEEPLY (http://www.mediafire.com/?dygm9yxi9eq) တဲ့နားတော့ ထောင်ဖူးမှာပါ ကောင်းလို့တင်ပေးလိုက်တာ..
CASABLANCA (http://www.mediafire.com/?xje4n1o090x)ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ လူတိုင်းလိုလိုနားထောင်ဘူးမှာပါ..
ထူးအိမ်သင်ပြန်ဆိုထားပါတယ် နားထောင်ကြည့်ပါ လွမ်းစရာလေး... :&#039;( :&#039;(
IT&#039;S YOUR LOVE (http://www.mediafire.com/?0n7rnnxzby3)ဒါလေးလည်း နားထောင်ကြည့်ပါဥိး ကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.. :)
say what you want (http://www.mediafire.com/?vdmkdtkr3m2)ဒီသီချင်းကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ သီချင်းလေးပဲ...
နားမထောင်ဘူးသေးရင် အခုဒေါင်းလိုက်တော့ဗျို့ .. ;D
ဒီသီချင်းလေးနာမည်က Love me (http://www.mediafire.com/?49wtymthgob) တဲ့ :) :)
Puddle Of Mudd အဖွဲ့ရဲ့ 2007 ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ Famous - album ထဲက ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းပေါ့ ... :)
We Don&#039;t Have To Look Back Now (http://www.zshare.net/audio/12023473538fa45b/)
I&#039;m So Much Like You
We&#039;ll Let Go Of Everything We Know
&#039;till The Past Is Out Of Sight
We Don&#039;t Have To Look Back Now
We Can Stand Together, We Don&#039;t Have To Look Back Now
In A World So Big, It&#039;s Not Easy To Choose
So We&#039;ll Let Go Of Everything We&#039;ve Ever Known
Everything&#039;s New Tonight, We&#039;re Going Our Own Way
The Bridge Is On Fire, We&#039;re Flying Higher Now
..... ကဲ ... ကြိုက်သွားပြီမဟုတ်လား .... ပြောသားပဲ ;D
Staind ရဲ့ 2005 album - Chapter Vထဲက နာမည်အကြီးဆုံးသီချင်းပါဗျာ ... :)
[B]Right Here (http://www.zshare.net/audio/12024504d09b4012/)[B]
I know I&#039;ve been mistaken
But just give meabreak and see the changes that I&#039;ve made
I&#039;ve got some imperfections
And if you chose to walk away I&#039;d still be right here waiting
I hope you&#039;re not intending
To be so condescending it&#039;s as much as i can take
and you&#039;re so independent
I&#039;ve madeacommitment
I&#039;m willing to bleed for you
Why can&#039;t you just forgive me
I don&#039;t want to relive all the mistakes I&#039;ve made along the way
...... ကဲ ... ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူလား ... ;)
I just called to say I love you ဆိုတဲ့ သီချင်းကို Cover Girls ဆိုတဲ့ ထိုင်းမလေးတွေက မြူးမြူးကြွကြွလေးးပြန်လည်
ဆန်းသစ်ပြီး သီဆိုထားတာပါ....။သူတို့ကြည့်ပြီး လိုက် ခုန်လာတယ်(ရင်ဘတ်ပြောတာပါ :D)။ကောင်မလေးတွေက
ချစ်စရာလေးတွေကိုး.... ;D ;D ;D
flash နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ဒီတော့ပစ်လေးမှာ နဲနဲချင်းစီတင်ပေးပါ့မယ်...တစ်ခြားရှိတဲ့ မောင်နှမတွေလည်း ၀ိုင်းတင်ပေးကြပါဥိးနော်..
အဲလက်(စ်)ဆိုထားတဲ့ မင်းစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် (http://www.mediafire.com/?ysdv1sojdct)
လေးဖြူဆိုထားတဲ့ အရေးမကြီးဘူး (http://www.mediafire.com/?mzwzmmj39nn)
slepping child (http://www.mediafire.com/?jjmyzochn9h) ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ မြန်မာမှာတော့ စည်သူလွင်ပြန်ဆိုထားပါတယ် အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ..
thank you (http://www.mediafire.com/?ix5yzouftz9) ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ နာမည်ကြီးတဲ့သီချင်းလေးပါပဲ ကောင်းလို့ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ..
I miss you (http://www.mediafire.com/?o0dxacwmt8d)
Don&#039;t forget to remember (http://www.mediafire.com/?xncptnthhxz)
Anybody have &quot;Burning Bridges&quot; of Mike Curb Congregation??
ချစ်သူနာမည်မှာ ဖြူပါသူများအတွက် ချစ်သူဖြူဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို flash ဖိုင်နဲ့ပြန်လုပ်ထားတာပါ....
ရင်ဂို ဆိုထားတဲ့ မင်းအတွက် ငါ (http://www.mediafire.com/?9jy9d0navx1)ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို flash ဖိုင်နဲ့ပြန်လုပ်ထားတာပါ..
ဟန်ထူးလွင် ဆိုထားတဲ့ နီးနီးလေးနဲ့ဝေး (http://www.mediafire.com/?cmcjtyatygt)ဆိုတဲ့ သီချင်းကို flash နဲ့ ပြန်လုပ်ထားတာပါ
ူL ဆိုင်းဇီ ဆိုထားတဲ့ မိုးရာသီထဲ (http://www.mediafire.com/?ox42mmkjydd) ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို flash ဖိုင်နဲ့ ပြန်လုပ်ထားတာပါ...
the day you went away (http://www.mediafire.com/?exybjgzzzlj)ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ကြိုးကြာနဲ့ စင်ဒီ ပြန်ဆိုဘူးပါတယ် အားလုံးကြားဘူးမှာပါ..
D U hav David Cook`s songs??
If I need urgently. :D
Thx all naw.
Timbaland ရဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...သီချင်းနာမည်က Apologize တဲ့ ...သီချင်းကောင်းလေးပါပဲ ။
’I’m holding on your rope,
[ apologize song text brought to you by LyricsYouLove ]
Now it’s turning blue, and you say...
I said it’s too late to apologize, it’s too late whoa.....
I’m holding on your rope, got me ten feet off...’
အေးအေးလေးနဲ့ သီချင်းနားထောင်ရင်း ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရသလို ခံစားရလိမ့်မယ်နော်..
သီချင်းထဲမှာ ဇာတ်ကောင်က ၃ ယောက်ပါပါတယ်..
ကျွန်တော်ကတော့ Jimmy လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာ..လူတိုင်းကို..
အကြိုက်ချင်း မတူခဲ့ရင်တော့ excuse ဗျာ..:)
နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ယူလိုက်ပါဗျာ (http://www.zshare.net/audio/130838403ec81297/)
ီDon&#039;t Cry Joni
Jimmy please say you&#039;ll wait for me
I&#039;ll grow up some day you&#039;ll see
I&#039;ve known her I guess 10 years or more
Joni, Joni please don&#039;t cry
you&#039;ll forget me by and by
you&#039;re just 15, I&#039;m 22
and Joni I just can&#039;t wait for you
and asked my Joni if she&#039;d marry me
but things weren&#039;t like they were before
Jimmy, Jimmy please don&#039;t cry
it&#039;s been5years since you&#039;ve been gone
&quot;Hold me forawhile&quot; ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးများ သိကြလားဟင်..။ ရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေး ပါနော်။ :D
သီချင်း website ပေးမယ်
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစနစ်နဲ့ ယူလိုက်ပါ(အားနာပါတယ် connection မကောင်းလို့)
I would like to share something with you all.....And I do hope you all would enjoy that website as well.....lol.....hehe :)
It&#039;s www.jango.com It&#039;s an online radio and all you need to do is just type in the artist that you would like to listen and they will createaradio station for you...or they will straight away tune in to one of the channels that already have. Then you can listen to same type of songs....
Wish you all will enjoy it..........
Cheers..... ;) :) :) :) :) :) ;)
Lonely, I&#039;m Mr. Lonely
For my own, I&#039;m so lonely
I&#039;m Mr. Lonely
Yo, this one here goes out to all my playas out there man, ya
know? That got that one good girl dog, that&#039;s always been
there man, like... And then one day she can&#039;t take it no more
and decides to leave.
My whole life came crashing and I&#039;m so...
I&#039;m Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I&#039;m so lonely (So lonely)
Can&#039;t believe I hadagirl like you,
Baby you&#039;reagood girl and I had no right.
Cause without you in my life girl I&#039;m so...
Been all over the world and I ain&#039;t never metagirl that
could take the things that you&#039;ve been through
Never thought the day would come when you would get up and run
Cause there ain&#039;t no where on the globe I&#039;d rather be
Ain&#039;t no one on the globe I&#039;d rather see
Never thought that I&#039;d be alone
I didn&#039;t think you&#039;d be gone this long
Baby gil I didn&#039;t mean to shout
And it&#039;s driving me crazy cause I&#039;m so...
If I need urgently.
Innocent ၁ ပုဒ်တော့ရှိတယ်။
The Offspring - Rise and Fall, Rage and Grace album မှာ ကျွန်တော် ဒါလေးတွေကြိုက်ပါတယ် ...။ ဘယ်အပုဒ်တွေ မြန်မာလိုပြန်ကြားရမလဲ စောင့်ကြည့်ရအောင် ...
Kristy, Are You Doing Okay (http://ifile.it/sw5vi9q)
Fix You (http://ifile.it/b3pzrm4)
Japan သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။နားထောင်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်(ကြိုက်တယ်ဆိုရင်) ။သီချင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ &quot;To be around, I&#039;LL BE BY YOUR SIDE&quot;
ပါ။သီချင်းလိုက်ဆိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ lyrics ကဒီနေရာ (http://fangirlcloset.wordpress.com/2008/02/02/%E3%80%8C%E3%81%9D%E3%81%B0%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AD%E3%80%8D-%E9%9D%92%E5%B1%B1%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%9E-featsoulja/)မှာရှိပါတယ်။သီချင်းကိုတော့ ဒီနေရာ (http://www.zshare.net/audio/51181355df882a07/)မှာယူလိုက်ဗျာ...
The Day You Went Away ကိုလိုချင်ပါတယ်. . mediafire ကအဆင်မပြေလို့ပါ။
ifile.net ကတော့အဆင်ပြေမှာပါ။ အရမ်းခိုက်တဲ့ သီချင်းမို့ပါဗျာ။
mediafire ကမတင်ပဲနဲတခြား link ကတင်လိုမရဘူးလားဂျာ download ချလိုမရဘူးဂျ :&#039;( &gt;:(
အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ သီချင်းများအားလုံးကို ဖိုင်တစ်ခုနှင့်စုပြီး sendspace မှ ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။အဆင်မပြေမှုများရှိပါက ပြန်လည် ပြောပေးပါ..
Download here (http://www.sendspace.com/file/79rah9)
ကိုဟိန်း Titanic Flash File ပြန်တင်ပေးပါ mediafrie နဲ့ ဟိန်းလေး မရဘူး
အကိုကရင်လေးပြန်တင်ပေးထားတာလဲ အဲလက်(စ်)ရဲ့ မင်းစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် တစ်ပုဒ်ပဲရတယ်
Pearl Jam Discography (http://www.warez-bb.org/viewtopic.php?t=2120638)
1995 - Mirror Ball (with Neil Young)
Credit to Original uploaders !!!
John Lennon Discography (http://www.warez-bb.org/viewtopic.php?t=2125118)
U2 - Discography (http://www.warez-bb.org/viewtopic.php?t=2129339)
U2-All That You Can&#039;t Leave Behind
သူငယ်ချင်းရေ ..ifile.it ကပြန်တင်ပေးပါလား ...... ဒေါင်းလို့ မရဘူးနော် ... ပြန်တင်ပေးနော် ... နော် :P
ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/ginaxh)
i do it for u (bryan adam))
ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/950p6t)
hard to say i&#039;m sorry (westlife))
ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် (http://www.sendspace.com/file/xgzmrq)
ွှThe Corrs selection ခွေရှိရင် မျှဝေပေးကြပါဗျို့.ကျွန်တော်ရှာတာ မတွေ့လို့ပါ တစ်ခွေချင်းဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာ....
eurovision 2009 သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အာဖရိကသား ကင်မရွန်းနိုင်ငံက စိန်ရိုင်းတပွင့် ဖြစ်တဲ့ အဆို တော် Akon ရဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ထွက် Akon - In Your Eyes (2005) အယ်လ်ဘမ် လေးဖြစ်ပါတယ်...။ ရှိပြီးသားဆိုရင် ခွင့်လွတ်ပါ...။
အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ...။
အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ...။ မသိသေးတာ မတတ်သေးတာရှိရင် သင်ပြပေးပါ...။
ABBA (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid ) ဆိုတာ သူတို့အဆိုတော် ၄ယောက်ရဲ့နာမည်ထိပ်စည်းစာလုံးကိုယူထားတာပါ။
သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာ 1970 မှ 1982 ထိကိုအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ် 1983 မှာတော့အုပ်စုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအခွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးသီချင်းများကိုစုစည်းပြီး 1992 မှာပြန်ထုတ်ခဲ့တာပါ။
Mamma Mia (၂၀၀၈) ရုပ်ရှင်မှာ ဒီအခွေထဲကသီချင်းတွေကိုသုံးခဲ့တာပါ။
အပိုင်း ၁ (http://ifile.it/fl6vsmw)
အပိုင်း ၂ (http://ifile.it/zng1e4p)
အပိုင်း ၃ (http://ifile.it/opx0vjz)
အပိုင်း ၄ (http://ifile.it/sl17oih)
အပိုင်း ၅ (http://ifile.it/q8tdupb)
အပိုင်း ၆ (http://ifile.it/90j7mhu)
စကားဝှက်ကတော့ WWW.Myanmarengineer.Org ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်တွေကိုတော့ winRAR, 7zip, HJsplits နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြည်လို့ရပါတယ်။
I&#039;ve never been to me
You&#039;readiscontented mother
I&#039;ve no doubt you dream about
the things you&#039;ll never do
Ooh I&#039;ve been to Georgia and California
I&#039;ve been to paradise
but I&#039;ve never been to me...
don&#039;t just walk away
&#039;cause I have this need to tell you
why I&#039;m all alone today
won&#039;t you shareapart
Ooh I&#039;ve been to Niece and the Isle of Greece
while I&#039;ve sipped champagne onayacht
I&#039;ve moved like Harlow in Monte Carlo
and showed &#039;em what I&#039;ve got
I&#039;ve been undressed by kings
and I&#039;ve seen some things
thatawoman ain&#039;t supposed to see.......
I&#039;ve been to paradise,
but I&#039;ve never been to me.......
Hey, you know what paradise is? It&#039;salie. A fantasy we create about
people and places as we&#039;d like them to be.
that&#039;s truth, that&#039;s love.........
Sometimes I&#039;ve been to crying for unborn children
I&#039;d be bitter from the sweet
I&#039;ve spent my life exploring
I&#039;ve been to paradise......
နောက်တစ်ပုဒ်ပါ..City FM7 ထဲက စိုင်းစိုင်းနဲ့သီရိဆွေ ဆိုထားတာပါ..ကောင်းတယ်ဗျ..
Hi အင်္ဂလိပ် သီချင်းအေးအေး လေးတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဟို ကိုးရီးယား ကားလေ ဘာလဲ &quot;Queen of the game&quot; ထဲက လေ အဲ့ထဲက ဇာတ်လမ်းလာလာချင်း သီချင်း လေးလေ
ကြမှာပါ အဲ့သီချင်းလေးကို ကိုကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်လို့ ရှာယူထားပါတယ် သီချင်း နာမည်က Midnight Blue လို့ခေါ်ပါတယ်. နားထောင်ကြည့်ကြဦးနော် ကံကောင်းပါစေဗျာ
ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ဦးနော် .........http://ifile.it/4xy19ps................
I&#039;d still feel for you
You&#039;re all I need, my love, my Valentine
You&#039;ve opened my eyes
I&#039;ve dreamed of thisathousand times before
But in my dreams I couldn&#039;t love you more
&#039;Cause all I need is you, my Valentine
MARTINA MCBRIDE - Valentine.mp3 - 2.91MB (http://www.zshare.net/audio/737276112f82cfe1/)
Expect to be I’ll be right here
Fair To You-Akon.mp3 - 3.08MB (http://www.zshare.net/audio/737278485f65d782/)
Ne-Yo ဆိုထားတဲ့ Mad ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ။ flv ဖိုင်ပါ ။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားက အဆင်မပြေမှုတွေကို ဖော်ကြူးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ ။ သီချင်းလေး နားထောင်ရင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းလာတယ် ။ ခံစားချက်ချင်း တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင် ကြိုက်မှာပါ ။ ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ပြီး အဆင်မပြေကြတဲ့ စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်နေကြတဲ့ ချစ်သူတွေ ပြန်လည် အဆင်ပြေပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ....သီချင်းလေးကိုတော့ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ ။
Mad - Ne Yo (http://ifile.it/tsmzj54/)
ဒါကတော့ သီချင်းစာသားလေးပါ ။
She&#039;s starin&#039; at me
I&#039;m sittin&#039; wonderin&#039; what she&#039;s thinkin&#039;
Nobody&#039;s talkin&#039; &#039;cause talkin&#039; just turns into screamin&#039;
And now it&#039;s I&#039;m yellin&#039; over her, she yellin&#039; over me
And what&#039;s even worse?
That we don&#039;t even remember why we&#039;re fighting
Nothin&#039;, crying for
But we won&#039;t let it go for
&#039;Cause I can&#039;t sleep through the pain
Can&#039;t sleep through the pain
Girl, I don&#039;t wanna go to bed mad at you
And I don&#039;t want you to go to bed mad at me
No, I don&#039;t wanna go to bed mad at you
Girl when you&#039;re constantly accusing
Askin&#039; questions like you already know
We&#039;re fighting this war
This ain&#039;t the way that love is supposed to go
Whoa, what happened to workin&#039; it out?
We&#039;ve fall into this place
Where you ain&#039;t backin&#039; down and I ain&#039;t backin&#039; down
It&#039;s all for
Oh baby, I know sometimes it&#039;s gonna rain
Oh, baby this love ain&#039;t gonna be perfect
And just how good it&#039;s gonna be
Long as everything&#039;s all right between us
Baby, we&#039;re gonna be happy, oh
Baby, I know sometimes it&#039;s gonna rain
Oh no no no...........
Justin Bieber ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Eenie Meenie Remix လေးပါ။ မြူးမြူးကြွကြွလေးနဲ့ ကလို့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းလေးကို Download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ .. နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ် ..
မင်းသမီးလည်း ကြိုက်တယ် .. :4:
နားထောင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာ .. Iyaz MTV တွေ တော်တော်လေးကောင်းတယ်... နောက်နှစ်ပုဒ်လောက် ကောင်းတာလေးတွေ ရှိသေးတယ် ..
Solo နဲ့Replay ပါ ... နားထောင်ကြည့်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် တင်ပေးပါမယ် ...
Well it&#039;s done know it&#039;s ya boy IYAZ &quot;J.R&quot; Rotem
Now wit&#039;agirl like u, nothing u can do
But wit&#039; ya girl
i&#039;m losing control..yo!
Now wit&#039;agirl like you,
I don&#039;t care who,
It doesn&#039;t meanathing,